आजसम्मकै सबैभन्दा बढी एकैदिन ९ हजार ८४१ जनाले जिते को’रोना ! – News543Online
May 28, 2021 adminLeaveaComment on आजसम्मकै सबैभन्दा बढी एकैदिन ९ हजार ८४१ जनाले जिते को’रोना !
पछिल्लो २४ घण्टामा झण्डै १० हजार जना को’रोना मुक्त भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आज ९ हजार ८४१ जनाले कोरोना जितेका छन्। यो संख्या नयाँ सं’क्रमित भन्दा संख्या नयाँ सं’क्रमित भन्दा २९ सय ८६ ले बढी हो । योसँगै सं’क्रमण मुक्त हुनेको संख्या ४ लाख २८ हजार ६७० पुगेको छ ।
यि हुन भेरि अस्पतालमा नर्स र डाक्टर कुटने ।
यीनै इन्जिनियर हुन जसले दिनरात नभनी ठड्याए ऐतिहासिक धरहरा